थाहा पाउनुहोस् मोदीका कारण आज कहाँ कहाँ हुन्छ जाम ? - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
थाहा पाउनुहोस् मोदीका कारण आज कहाँ कहाँ हुन्छ जाम ?
Published On : २८ बैशाख २०७५, शुक्रबार १०:४८
काठमाडौं, २८ वैशाख– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणका लागि आज आउँदैछन् । साढे १० बजे जनकपुर विमानस्थलमा अवतरण गरेसँगै उनी करिब दुई घन्टा जनकपुरमा रहने कार्यक्रम छ । त्यपछि मोदि काठमाडौं आउने छन् । मोदीको भ्रमणका कारण शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंको यातायात व्यवस्था प्रभावित हुने भएको छ ।
शुक्रबार(आज) विहान भारतबाट मोदी सोझै जनकपुर आउने कार्यक्रम छ । त्यहाँ नागरिक अभिनन्दन लगायतका कार्यक्रम सकिएसँगै मोदी हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौं आउनेछन् ।
जनकपुरको कार्यक्रम सकिएसँगै मोदी दिउँसो करीब १ बजे काठमाडौं उत्रने छन् । त्यसपछि उनी चुच्चेपाटीमा रहेको होटल हायत तर्फ जाने छन् । त्यसक्रममा उनी विमानस्थलबाट निस्कनु भन्दा केही समय अघिदेखिनै उक्त सडक खण्डका सवारी आवागमन बन्द हुनेछ ।
तिनकुने तर्फबाट सिनामंगाल, एयरपोर्ट, गौशाला, चावहिल, बौद्ध, जोरपाटी लगायका स्थानमा मोदी विमानस्थलमा अवतरण गर्नुपूर्व नै सवारी आवागमन बन्द हुनेछ ।
मोदीलाई सरकारले विशेष सत्कार गर्दै छ उनलाई टुँडिखेलमा दिउँसो चार बजे गार्ड अफ अनर प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसका लागि चाबहिल गौशाला, तिनकुने, बानेश्वर, माइतिघरको सवारी प्रभावित हुने छ । चार बजे उनी सैनिकमञ्च टुँडिखेल जानुभन्दा करीब एक घन्टा अगाडी उक्त सडक खण्डमा सवारी खाली गरिने छ ।
गार्ड अफ अनर लिएसँगै मोदी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँ भेटवार्ताका लागि कान्तिपथ जानेछन् । उक्त सयममा रत्नपार्क, जमल, दरबारमार्ग, लैनचउर लगायतका स्थानका सडक वन्द हुने छ ।
उपराष्ट्रपतिसँगको भेटवार्तापछि मोदी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगको भेटवार्ताका लागि शीतलनिवास जानेछन् । त्यसक्रममा लैनचउर, महाराजगञ्ज, चक्रपथ क्षेत्रमा सवारी आवागमन बन्द हुनेछ ।
राष्ट्रपतिसँगको छलफल सकिएसँगै मोदी पुरानो वानेश्वरमा रहेको होटल द्वारिकाजमा जानेछन् । त्यसक्रममा पनि गौशाला, चावहिलदेखि पुरानोवानेश्वर आसपासको क्षेत्रको सवारी अस्तव्यस्त हुने छ ।
यस्तो छ शनिवारको तालिका
शनिवार विहान मोदी मुक्तिनाथ प्रस्थान गर्ने छन् । त्यस क्रममा होटल हायतदेखि एयरपोर्ट सम्मको रुटको सवारी वन्द हुनेछ । मुक्तिनाथ दर्शन गरेर मोदी करिब १० बजे त्रिभुबन विमानस्थल फर्कने छन् । त्यसपछि उनी पशुपतिनाथमा विशेष पुजा अर्चनाका लागि पुग्नेछन् । त्यसपछि उनको यात्रा होटल हायतका लागि हुनेछ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले राष्ट्रिय सभागृहमा दिउँसो २ बजे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई अभिनन्दन गर्ने कार्यकम रहेको छ । त्यसका लागि उनी होटल हायतबाट चावहिल, गौशाला, तिनकुने, बानेश्वर, माइतिघर, सिंहदरबार हुँदै भृकुटीमण्डप पुग्नेछन् । उनी राष्ट्रियसभागृह जानुभन्दा केही अगाडि नै सडक खाली हुनेछ ।
शुक्रबार मध्यान्नदेखि शनिबार अपराह्नसम्म राजधानीको ट्राफिक अस्तव्यस्त हुने भएका कारण वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा फाइदा पुग्छ ।